Bubble Shooter 9.2.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 9.2.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Bubble Shooter
Bubble Shooter ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အခမဲ့, ပွဲစဉ်3အဆင်းအရောင်နှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဆင့်ဆင့်များအတွက်ဂန္ဆုံးနဲ့စွဲလမ်းပူဖောင်းပေါ့ပ်ဂိမ်း Play ။ ဂိမ်းလျှော့ပေါ့ဒီပျော်စရာထွက်လက်လွတ်မနေပါနဲ့! ကောင်းမွန်သောဤဟောင်းဗားရှင်း၌သင်တို့ကိုရည်ရွယ် & shoot, ရှိသမျှပူဖောင်း drop & ကွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းဘောလုံးဗုံးအဖြစ်ဤမူရင်းပဟေဠိတွေနဲ့သင့်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့် - အချိန်မရွေး! ပူဖောင်းသေနတ်သမား™ Google Play တွင်ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးအခမဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။
, ပွဲစဉ်ရည်ရွယ်ထားနှင့်ဤလျှော့ပေါ့အရောင်-တိုက်ဆိုင်သည့်စွန့်စားမှုအပေါငျးတို့သဘောလုံးတပ်များ။ ဒါဟာမယုံနိုင်စရာသေနတ်သမားခံစားရန်မိသားစုများအတွက်စုံလင်သော, ရိုးရှင်းခြင်းနှင့်သင်ယူရန်လွယ်ကူပါ!
စမ်းသပ်ဖို့သင့်နည်းဗျူဟာကျွမ်းကျင်မှုထားပါ! မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ကိုရောက်ရှိသည်အဆင့်တွင်3ကြယ်များရနိုင်သူကိုကြည့်ပါ။ သငျသညျ play စဉ်ဒင်္ဂါးပြားဝင်ငွေနှင့်အေးမြ Boosters ရဖို့သူတို့ကိုအသုံးပြုပါ။ အဆိုပါပျော်စရာမစ်ရှင်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ရှင်းလင်းနှင့်အထူးနေ့စဉ်ဆုကြေးငွေစုဆောင်းဖို့သေချာစေရန်ကျွမ်းကျင်မှုဖြေရှင်းသင့်ရဲ့ယုတ္တိဗေဒနှင့်ပဟေဠိကိုသုံးပါ။
NOW ကအကောင်းဆုံးပူဖောင်းတနေ့ဂိမ်း & Start ကို Cracked ပူဖောင်း Download!
Classic ဂိမ်း Mode ကို Play - ဒါကြောင့်ပျော်စရာ, ဒါကြောင့်ရိုးရိုး ။
ဗုံးနှင့်ရှင်းလင်းဘုတ်အဖွဲ့သည်မစ်ရှင်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဒင်္ဂါးပြား & ကြောက်မက်ဘွယ်ဆုလာဘ်အနိုင်ရပွဲစဉ်3ဘောလုံး။ အဆိုပါလေဆာရည်ရွယ်ချက်မှာ drag and တစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ယူကရုတ်သိမ်းပေးရန်ဖို့ screen ပေါ်မှာထိပုတ်ပါ။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီအဆင့်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပူဖောင်း layout ကိုအညီနည်းဗျူဟာဖွဲ့စည်းရန်အရေးကြီးပါတယ်။ shoot နဲ့ pop ဒီပျော်စရာအခမဲ့ဂိမ်းထဲမှာရှိသမျှကိုရောင်စုံဘောလုံး, ဂရုတစိုက်ရည်ရွယ်ထားနှင့်ပစ်မှတ်ထိမှန်! သားအပေါင်းတို့, ကွဲပြားခြားနားသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပဟေဠိအားဖြင့်သင်တို့၏သွားရာလမ်းအလုပ်လုပ်ဦးနှောက်ကြော်ငြာဗီဒီယိုတွင်တစ်ကြိမ်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အဆင့်ဆင့်အနိုင်ရ။
Arcade ဂိမ်း Mode ကိုခံစားကြည့်ပါ - ပျင်း get ဘယ်တော့မှ !
ဒီအေးမြ retro mode ကိုအတွက်ဘောလုံး Pop နှင့်ဖြောင့်သင့်ရဲ့ Android device ကိုပေါ်ဂန္ Arcade အတွေ့အကြုံကိုပြန်လည်ရှာဖွေရန်အတွက်။ ဒီဖြစ်လို့ဂိမ်း ပို. ပင်စိန်ခေါ်မှုရရှိသွားတဲ့အဖြစ်ပျော်စရာပဟေဠိအဆင့်ဆင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏တလျှောက်တိုး။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုအကောင်းဆုံးကို retro ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုခံစားကြည့်ပါနှင့်သင်လိုချင်သောအခါတိုင်းမရှိအင်တာနက်ချိတ်ဆက်လိုအပ်ပါသည်။
ပဟေဠိဂိမ်း Mode ကိုကြိုးစားပါနှင့်ပျော်စရာအလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်သည့် Ultimate Bubble ရှာဖွေရန်!
ဤသည်သေနတ်သမားသခင်ပဟေဠိစိန်ခေါ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အတူစိတ်လှုပ်ရှားစရာပူဖောင်းင့်ဖောက်သည့်အခမဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ , နောက်တစ်ကြိမ်အံ့သြဖွယ်ပဟေဠိအဆင့်အထိတိုးသင့်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဘို့ဤစွဲလမ်း, ပေါ့ပေါ့ဂိမ်းကစားနေစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့ကိုက်ညီခြင်းကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့ရောင်စုံဘောလုံး shoot ။
တက်မြန်မြန်နှင့်နောက်ကောက်ကြိတ်ခွဲသည့်ပူဖောင်း join, ဒါပေမယ့်သတိပြုရကြမည် - သင်ရိုးရှင်းစွာရပ်တန့်မနိုင်ပူဖောင်းလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက် start တစ်ချိန်က!
Retro ဂိမ်းအသစ် features တွေ
ကျနော်တို့ဂန္ Arcade ဂိမ်းကို ယူ. သငျသညျကျိန်းသေကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်တချို့ features အသစ်ကထပ်ပြောသည်။
★ 3000 + စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဆင့်ဆင့် ပို. လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကဆက်ပြောသည်အတူ။
★ Facebook ကိုချိတ်ဆက်ရန်နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူပျော်စရာ share!
★သည် loop အတွက်နေပါ: ယခုသင်ထောက်ခံမှုဖို့တိုက်ရိုက် Message ပေးပို့ဖို့ option ကိုရှိသည်။
★ Clear ကိုအတားအဆီးနှင့်စိန်ခေါ်မှုများရိုက်တယ်။
★ Colorblind mode ကို - ဒါကြောင့်လူတိုင်းအခမဲ့ပျော်စရာကိုက်ညီခြင်းဂိမ်းများကိုခံစားနိုင်။
★အဆိုပါရောင်စုံကိရိယာသော့ဖွင့်ဖို့တတန်းအတွက်7ပူဖောင်း Pop ။
★ Drop 10+ တစ်ဗုံးရဖို့တစ်ကြိမ်မှာသှ။
★အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆို Play မရှိ Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုကိုလိုအပ်နေပါသည်!
မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? သင့်ရဲ့လက်ချောင်းတက်နွေးနဲ့အလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်စတင်ပါ။ ဒီပျော်စရာပေါ့ပေါ့သေနတ်သမားတွေ့ကြုံခံစားခြင်းနှင့်ပဟေဠိများနှင့်အံ့သြဖွယ်များနှင့်ပြည့်စုံအံ့သြဖွယ်အဆင့်ဆင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏လေ့လာစူးစမ်း။ အကောင်းဆုံးကိုအွန်လိုင်းအရောင်-တိုက်ဆိုင်သည့် app ကိုရယူပါချောမွေ့နှင့်ဖြစ်လို့ဂိမ်းပျော်မွေ့။ ဤမျှလောက်များစွာသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဆင့်ဆင့်, အစွမ်းထက် Boosters နှင့်ကြောက်မက်ဘွယ် features တွေနှင့်အတူ, သငျသညျရိုးရှင်းစွာချထားမည်မဟုတ်!
အဆင်သင့် Get, !! သည့်ဘောလုံးရည်ရွယ်ထားနှင့်ရိုက်ကူးယူ
အခမဲ့အဘို့ဤပျော်စရာ Arcade ဂိမ်း Download များနှင့်ကစား။ ဒါဟာ wifi မပါဘဲကစားရန်စုံလင်သော app ကိုဖွင့်! တိုင်း 2-3 ပတ်ကြာကျနော်တို့ features အသစ်နှင့်အသစ်အဆင့်ဆင့်ထည့်ပါ။ အဆိုပါပျော်စရာ လာ. join!
ပူဖောင်းသေနတ်သမား™ကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အချို့ optional ကို In-ဂိမ်းပစ္စည်းများငွေပေးချေမှုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
https://www.facebook.com/BubbleShooterOriginal/: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FB စာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်
Bubble Shooter အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Bubble Shooter အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Bubble Shooter အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Bubble Shooter အား အခ်က္ျပပါ
my12345 စတိုး 680 829.65k
Bubble Shooter ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Bubble Shooter အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 9.2.1
ထုတ်လုပ်သူ Fat Fish Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.ilyon.net/privacy-policy/
လက်မှတ် SHA1: 04:32:36:EC:6C:43:EF:18:DE:66:6D:D6:6A:1D:54:07:30:FB:C2:FA
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Ilyon
Bubble Shooter APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ